विहानमा हिंड्ने गर्नु भएको छ भने यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर।एकचोटी अनिवार्य हेर्नुहोला |
September 25, 2021 adminLeaveaComment on विहानमा हिंड्ने गर्नु भएको छ भने यस्तो बन्दै छ हजुरको शरीर।एकचोटी अनिवार्य हेर्नुहोला
स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना बढेसँगै हामी हिँड्न, दगुर्न, व्यायाम गर्न थालेका छौं । अहिले धेरैजसो प्रातकालिन भ्रमणमा निस्कन्छन् । विहानको समयमा पैदल हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि अत्यान्तै लाभदायक मानिन्छ । तर, कति हिँड्ने, कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हिँड्दा छिटो–छिटो वा तिब्र गतिमा हिँड्नु उपयुक्त हो ।
यसले शरीरका भित्री अंगहरुको समेत राम्ररी व्यायाम हुन्छ । फोक्सो, मुटुमा यसले प्रभाव पार्छ । रक्तप्रवाह र श्वासप्रश्वास क्रियालाई सघाउ पु¥याउँछ । जोर्नी र मांशपेसीलाई लचिलो बनाउँछ । बिहानको समयमा २५ देखि ३० मिनेटसम्म हिँड्नु उचित हुन्छ । वा यो पर्याप्त हो । फटाफट तिब्र गतिमा २५–३० मिनेट हिँडेपछि राम्ररी पसिना आउँछ । शरीरका अंगहरु चलयमान हुन्छन् ।
अक्सर के देखिन्छ भने मान्छेहरु प्रातकालिन भ्रमणमा त निस्कन्छन्, तर हाट–बजार भर्न निस्किए जस्तै गरी हिँड्छन् । कोही साथीभाईसँग गफ गर्दै सुस्तरी हिँड्छन्, कोही मोबाइलमा गीत वा समाचार सुन्दै । मोवाइल प्रयोग गर्दै हिँड्नु उचित हो ? के त्यसरी हिँड्दा हाम्रो व्यायाम प्रभावकारी हुनसक्छ?
मांसपेशीको दुखाइ–बिहानको पैदल यात्रा गर्दा, हामी हाम्रो दुवै हातमाथि र तल गरेर चलायमान बनाउँछौं । यस प्रक्रियामा सम्पूर्ण हात र मांसपेशीहरूको व्यायाम हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार जब हामी एक हातमा मोबाइल समातेर हिड्छौं तब हाम्रो मांसपेशी असंतुलन पैदा हुन्छ। जसले मांसपेशीको दुखाइ बढाउन सक्छ।
मुद्रा नराम्रो हुन्छ–बिहान उठ्दा फोनको लगातार प्रयोगले कारण हाम्रो शरीरको स्थिति खराब हुन सक्छ । हिँड्दा मेरुदण्ड सधैं सीधा हुनुपर्छ। मोबाइलको उपयोग गरेर हाम्रो सबै ध्यान यसमा कायम गर्न सकिन्छ । हाम्रो मेरुदण्ड यतिबेला पनि सिधा रहँदैन। लामो समयसम्म यसरी हिँड्नुले तपाईंको शरीरको मुद्रा बिगार्छ।
ब्याक पेनको समस्या–लामो समयसम्म गलत तरिकाले हिँड्नुले हाम्रो शरीरको मुद्रामा असर गर्छ। यस अवस्थामा यो समस्याको कारण त्यही मोबाइल बन्न सक्छ।त्यसैले हिँड्दा मोबाइलको उपयोग गर्न कम गर्नुहोस्।एकाग्रतामा कमी–हिँड्दा हाम्रो सबै ध्यान शरीरमा मात्र हुनुपर्छ। तर मोबाइलको उपयोगका कारण यो सम्भव हुँदैन। हाम्रो ध्यान मोबाइलमा रहन्छ, जसको कारण मनको एकाग्रता समाप्त हुन्छ। जसले हाम्रो शारीरिक वृद्धिमा ध्यान दिन्छ।
यस्ता लक्षण देखिए बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोस्,मिर्गौला सुन्निएर यस्ता डरलाग्दा रोग लागेको हुनसक्छ।
नयाँ कोरोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सतर्क हुनुहोला।थाहै नदिइ ज्यान लान सक्छ।समयमै जानकारी लिनुहोस्